Akụkọ - Kedu njirimara na ngwa nke ihe eji eme ka calcium na zinc
Calcium na zinc stabilizer ka a na-akpọkwa ezigbo calcium na zinc na-arụ ọrụ nke ọma yana nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke a na-ejikọ site na usoro ihe mejupụtara pụrụ iche yana nnu calcium, nnu zinc, mmanu na antioxidant dị ka ihe mejupụtara ya. na zinc stearate dị ka ahụ bụ isi, agbakwunyere na polyol ester, phosphite ester, ketone antioxidant ma ọ bụ epoxy ester na ọtụtụ ihe ndị na -eme mmanụ. Sistemụ ngwakọta ngwakọta PVC na-abụghị plastik, wee meziwanye nguzo mmanu n'ime na mpụga n'etiti na mbubreyo extrusion, wee chọpụta mmelite nke mgbọ a wụrụ awụ, nkwalite gelation na mmiri na-agbaze nke ọma. dị ka Pb, nnu Cd na tin tin, mana nwekwara ezigbo nkwụsi ike ọkụ, nkwụsi ike, nghọta na agba po Na ngwaahịa resin PVC, arụmọrụ nhazi dị mma, nkwụsi ike nke ọkụ na-eduga nzere nnu, bụ ezigbo ihe nkwụsi ike na-adịghị egbu egbu.
A na-eji ọtụtụ ihe arụpụta ihe ndị na-eme ka calcium na zinc sie ike: calcium diketone stearate, phosphite na-adịghị egbu egbu, antioxidants, hydrotalcite na wax.
Dị ka mmepụta nke mmiri mmiri dị iche iche na ntụ ntụ calcium zinc, họrọ akụrụngwa dịtụ iche, dị ka ntụ ntụ calcium zinc na-ejikarị klas ntụ ntụ nke phosphite ester na-adịghị egbu egbu, ọkachasị ntụ ntụ.
Mmepụta nke calcium calcium na zinc n'ozuzu na-ahọrọ esters nke mmiri mmiri na-adịghị egbu egbu, ọkachasị akụrụngwa mmiri.
Ọdịdị nke calcium na zinc stabilizer bụ ntụ ntụ, mpempe akwụkwọ na mmiri mmiri.
Calcium na zinc stabilizer:
Ọdịdị nke calcium na zinc stabilizer bụ tumadi ntụ ntụ, mpempe akwụkwọ na mado. Ugbu a, a na-eji ntụ ntụ calcium zinc ntụ ntụ dị ka ihe nkwụsi ike PVC na-adịghị egbu egbu maka ọtụtụ ngwa, nke a na-ejikarị na nkwakọ ngwaahịa nri, akụrụngwa ọgwụ, waya Ugbu a, enwere calcium na zinc stabilizers maka PVC nke enwere ike iji maka ọkpọkọ siri ike na China.
Powdery calcium zinc stabilizer adịghị akwụsi ike dị ka nnu ndu, ọ nwere ụfọdụ mmanu mmanye, nghọta adịghị mma, ọ dị mfe ịgba ntu oyi na ihe ndị ọzọ. Iji meziwanye nkwụsi ike ya na nghọta ya, antioxidants dị ka igbochi phenol, polyols, esters phosphite na β- a na -agbakwụnye diketones iji meziwanye nkwụsi ike.
Usoro abụọ nke calcium na zinc stabilizers bụ sistemụ hydrotalcite na sistemụ zeolite.
Liquid calcium na zinc stabilizer:
Ọdịdị nke calcium calcium stabilizer bụ tumadi ìhè odo mmanu mmanu mmanu mmiri.Enweghị obere ihe dị n'etiti nkwụsi ike nke ntụ ntụ na mmiri mmiri, ihe nzere calcium zinc na -enwekarị solubility ka ukwuu, ma nwee ezigbo mgbasa na ntụ ntụ PVC, yana mmetụta na nghọta dị anya. na -erughi ihe na -eme ka uzuzu sie ike, agbanyeghị, enwere nnukwu ihe ize ndụ nke mmiri ozuzo nke na -eme ka mmiri sie ike.Ị kwesịrị ịhọrọ ezigbo ihe mgbaze.
1. Ọdịdị ngwaahịa a bụ ntụ ntụ na -acha odo odo, na -enweghị ọdịdị ojii na isi nke akụrụngwa lanolin acid; Ọ dakọtara na PVC ma nwee nkwụsi ike ọkụ ka mma karịa ndị ọzọ na -edozi calcium na zinc. Ọ nwere ike dochie calcium na zinc stearate.
2. Isi akụrụngwa akụrụngwa sara mbara, ịcha ya dị ala, usoro nkwadebe dị mfe ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ.
3. Nchekwa na gburugburu ebe obibi, lanolin acid n'onwe ya anaghị egbu egbu ma nwee arụmọrụ na-ejigide mmiri, ọ bụ nke mbụ iji ya dị ka ihe nrụzi PVC.
Site na usoro nhazi resin PVC nwere ezigbo mgbasa, ndakọrịta, ịhazi mmiri mmiri, mmegharị sara mbara, imecha elu dị mma; ezigbo nkwụsi ike, obere usoro onunu, yana ntụgharị; Na ngwaahịa ọcha, ịcha ọcha dị mma karịa ngwaahịa ndị yiri ya.
Ca -Zn stabilizer bụ ụdị calcium dị elu na -arụ ọrụ nke ọma - Zn compound stabilizer Ọmarịcha nkwụsi ike ọkụ na nghọta, enweghị oke mmiri ozuzo na ihe mbugharị mgbe ejiri ya na ngwaahịa PVC, mmetụta ya ka mma mgbe ejiri mmanụ na -eguzogide okpomọkụ. Ọ dị mma maka nhazi slurry PVC, ọkachasị maka ngwaahịa enamelled.Ọ bụghị naanị na ngwaahịa a nwere ezigbo ndakọrịta yana njikwa viscosity, mana ọ nwekwara ike nye agba agba mbụ na njigide agba. obere volatility, obere mbugharị na ezigbo nguzogide ọkụ. Ọ dabara maka ngwaahịa PVC dị ka ọkpọkọ dị nro na nke siri ike, granulation, ihe nkiri na ihe egwuregwu.
Onye Wpc Extruder, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Na -akụpịa igwe ihe, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Nweta Wpc,